Coral Reef: ငယ်ငယ်တုန်းက - ၂
Shinlay said on March 10, 2011 at 10:33 PM
လို့အကိုတ၀မ်းကွဲနဲ့ခြံထဲမှာပဲဆော့ရတယ်။
အဖွားနေ့ လည်အိပ်ရင် ခိုးထွက်ပြီးအပြင်မှာသွား ဆော့လို့ အရိုက်ခံရတယ်။ ကျမက ကိုကြီးကို ခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးပိုအရိုက်ခံခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့
အဖွာရဲ့ ဒုတ်ကိုအရင်ချိုးပြီး ထွက်ဆော့ကြတယ်။
Anonymous said on March 11, 2011 at 3:32 AM
၀မ်းကွဲမောင်နှမတွေ ဗြောင်းဆန်အောင်ဆော့တယ်။ အိမ်မှာက ငါးယောက်မို့ ငါးမျိုး..ပဲ တည့်လိုက် ရန်ဖြစ်လိုက်၊ တိုင်လိုက်တောလိုက်နဲ့ ဆူညံနေတာပဲ။ စာကလေးသိုက် လုပ်တမ်းဆော့ရင် ရှင်းရတဲ့ အိမ်အကူအစ်မကြီး.. စိတ်ညစ်ရပြီမှတ်။ ခေါင်းအုံးတွေကို စီထားပြီးအလယ်မှာ ၀င်အိပ်အပေါ်က စောင်တွေအုပ်နဲ့..အိပ်ယာခင်းတွေနဲ့ပတ် ပါးစပ်ကလည်း ပိကျိပိကျိလုပ်သေးတယ်။ စာကလေး အသိုက်ထဲ ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်လုပ်တာမို့..အစာရှာထွက် တယ်ဆိုပြီး ခြံထဲဆင်း မီးဖိုထဲသွားနဲ့.. ကုတင်ပေါ်ပြန်တက်နဲ့။ အဲလို ဆော့လဲပြီးရော အိပ်ယာခင်းတွေ ညစ်ပတ်..စောင်တွေ ပြန်လျှော်ရမို့ နောက်ပိုင်း လူကြီးတွေက အဲလိုဆော့ရင် ဒဏ်ပေးခံထိတယ်။
Rita said on March 11, 2011 at 8:28 AM
(ကိုယ်က စာအုပ်စာရင်းမှတ်ရတာကို ဘယ်လိုသဘောကျမှန်း မသိဘူး။ ဆိုင်တွေမှာလို စာအုပ်နောက်မှာ ရက်စွဲလေးမျဉ်းစောင်းနဲ့ ရေးရတာကို သဘောကျပြီး အတုခိုးလိုက်ရေးတာ။)
ခေတ်ချင်းတူလို့လားတော့ မသိ။ ဆော့နည်းတွေ၊ ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ tv prog တွေ တော်တော်လေး ဆင်တူတယ်။ အပေါ်က စာကြောင်းကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း တူနေလို့ အံ့သြမိသေးတယ်။
ps အပေါ်က စာကလေးသိုက်က တအား ဟားရတာပဲ။ LOL
ငယ်ငယ်က အဲလို အိုင်ဒီယာမရခဲ့တာ နာလိုက်တာ။
Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) said on March 11, 2011 at 5:22 PM
မဇွန်တို့ မောင်နှမရဲ့ တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန် ရှိကြပုံက ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာလေး။ မဇွန်က အကြီးပီပီ ညှာတာသနားတတ်ပြီး ကြင်နာမယ့်ပုံပဲနော်။
နန္ဒာ့ အမ ဧရာနဲ့လဲ နန္ဒာနဲ့ ၇နှစ်ကွာတယ်။ ညီအမတွေ အတူတူ အရုပ်မလေးတွေနဲ့ အင်္ကျီတွေလဲပေးပြီး အလှဆုံး ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီး ကစားတာ တူလို့ ငယ်ငယ်ကအကြောင်း မဇွန့်ရဲ့ ပိုစ့်ဖတ်ပြီး သတိရမိလို့ ပြုံးမိတယ်။
နန္ဒာက အငယ်ဆိုတော့ အရာရာ အလိုလိုက်ခံရလို့ ဆိုးတယ်။ အချော့ကြိုက်တာမို့ ထစ်ကနဲဆို စိတ်လဲ သိပ်ကောက်တာ။ နွဲ့ဆိုး ဆိုးတာ၊ ကိုယ့်ကို ချော့တာ၊ ဂရုစိုက်တာ ကြိုက်သူမို့ အခုထိ စိတ်ကောက်တတ်တုန်း။ :))
ကြင်နာတတ်တဲ့ အကိုကြီး၊ အမကြီးတွေရှိတဲ့ မောင်ငယ်၊ ညီမငယ်တွေ ကံကောင်းကြတယ်လို့ မြင်တယ်။ မောင်နှမတွေ၊ ညီအမတွေဆိုတာ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ချစ်ခင်ကြရင် ဘဝ တလျှောက်လုံးရဲ့ ဆိုးတိုင်ပင်၊ ကောင်းတိုင်ပင် မိတ်ဆွေကောင်းတွေပါပဲ။
အပြုံးပန်း said on March 11, 2011 at 10:16 PM
မနက်ကတည်းကတခြား ပီစီနဲ့ ဖတ်ပြီးသား၊
မြန်မာဖော့ ကီးဘုတ်မရှိလို့ အခုမှ လာရေးတယ်။
မောင်နှမ ကစားကြတာကို ရေးပြထားပုံက ပီပြင်တယ်၊ အမကြီးရဲ့ အမူအရာတွေကို ပိုမြင်ရတယ်၊
ချစ်ကြည်အေး said on March 12, 2011 at 10:20 AM
ဇွန်တို့ မောင်နှမ ဆော့ပုံလေးတွေက ဆန်းတယ်နော်....ပျော်စရာလေး၊ ဖတ်ရတာ မျက်လုံးထဲ တန်းမြင်လာတော့တာပဲ....:)
ရွှေပြည်သူ said on March 12, 2011 at 8:17 PM
အစ်မဇွန်ရဲ့ ငယ်ဘဝက ကစားပုံလေးတွေကို ဖတ်ရင်း ကိုယ့်ငယ်ဘဝကို သတိရလာမိတယ်... ခုနေပြန်တွေးတော့ လွမ်းစရာတွေနော်...
မမင်း said on April 4, 2011 at 2:11 PM
ဖတ်ပြီး ငိုချင်လာတာပဲသိတယ်။ မမင်းမှာလည်း ၅နှစ်ခွဲပိုငယ်တဲ့ မောင်လေးတစ်ကောင်နဲ့ ၁၁နှစ်ပိုငယ်တဲ့ ညီမလေးတစ်ကောင်ပဲ ရှိတယ်။ တူတူတော့ မကစားဖူးပါဘူး။ သူတို့ကို နားရင်းတော့ခဏခဏရိုက်ဖူးတယ်။
espaniage said on August 11, 2011 at 11:08 PM
i cant stop smiling while reading this. u got all details in your head. i love you sis.. :)
Anonymous said on February 4, 2012 at 7:36 PM
Beautiful story....I miss my sister too .... :((( LLZ
မိုးခါး said on February 6, 2012 at 12:33 PM
း) ညီမတို့ မောင်နှမက ၂ယောက်တည်းပဲ မတည့်ဘူး .. တွေ့တာနဲ့ သတ်တာပဲ .. တူတူဆော့တယ် .. ရန်ဖြစ်တယ် .. ပြီးရင်ပြန်ခေါ်တာပဲ .. ဘိုကျားသေနတ်ဆွဲပြီး ရှုံးသူ ကော်ဖီဖျော်တိုက်တမ်း ..း)) ဒလိတွေ ရကုန်ဘီ ...း)))